Ukushintsha Testing kanye nokwenza of Mobile App yakho nge Applause | Martech Zone
Test Automation kusuka Ihlombe kungumnikelo ogcwele wesevisi oqinisekisa ukuthi izinhlelo zakho zokusebenza zeselula nezewebhu ziziphatha ngokungaguquguquki ukusuka ekwakheni eyodwa kuye kokulandelayo. Ngivame ukutshela abantu ukuthi uma uhlela noma uthuthukisa noma yini futhi ubuza impendulo, uzothola impendulo engadingekile engeyona eyekhwalithi noma eningi. Ukucela impendulo kumuntu kufana nokubuza ukuthi, "Ngabe kukhona ongakuthola okungalungile ngalokhu?" nokuhlolwa komsebenzisi kusuka ekusetshenzisweni okuvamile kuye ekufuneni iphutha.
Ukuthola ipulatifomu lapho ungavivinya khona uhlelo lwakho lokusebenza ukuthola izimpendulo zekhwalithi kuzoqinisekisa ukuthi uhambisa ipulatifomu yakho ngendlela efanele, uthuthukise ukutholwa, futhi ekugcineni wehlise izindleko zokumaketha nezentuthuko. Ihlombe line-ebook elihle, Izindlela ezi-5 zokuwina nge-Mobile Automation leyo imininingwane ngokulinganiselwa nemikhuba emihle yokuhlolwa kohlelo lokusebenza lweselula - qiniseka ukuyilanda.
I-Mobile App Test Automation kusuka ku-Applause
I-applause test automation ifaka:
Uhlaka Lokushayelwa Kwehlombe - yakhiwe ngonjiniyela be-automation ochwepheshe futhi isuselwa kuzilimi namathuluzi ahola phambili embonini. Ithembekile eminyakeni eminingi yokuhlangenwe nakho, uhlaka lwenza izivivinyo zohlelo lwakho lokusebenza lusebenze futhi lusebenze ngokushesha futhi luzigcine zisebenza kunoma iyiphi inhlanganisela yeWebhu, i-iOS, ne-Android.
Shayela ihlombe umphakathi wokuhlola womhlaba wonke - onjiniyela be-automation abanolwazi abanokuhlangenwe nakho kweminyaka basebenzela izinkampani ezinkulu kakhulu emhlabeni. Amakhasimende we-Automation anikezwa iqembu elizinikele ekuqinisekiseni impumelelo yakho elawula uhlaka, amadivayisi, nokuhlanganiswa, ukubhala amacala wokuhlola nezikripthi, futhi yengamele ukuhlolwa ngakunye kokuhlolwa. Hlala ukhululeke ngenkathi siqapha impilo yohlelo lwakho lokusebenza.
Ukuzenzakalelayo Ideshibhodi - ukuqonda okusheshayo empilweni yokwakha kwakho kwamanje nokwedlule kohlelo lwakho lokusebenza. Zingaki izimbungulu esizivumbululile, amaphesenti amangaki esivivinyo esidlulile, ingabe siyathuthuka noma siya ngokuya siba sibi? Vula ideshibhodi bese uthola.
Tags: ihlombeokuzenzakalelayo kohlelo lokusebenza lweselulaukuhlolwa kohlelo lokusebenza lweselulaiskripthi sokuhlola uhlelo lokusebenza lweselulaukuhlolwa kwesicelo seselulaideshibhodi yokuhlola
Umthelela Wokumaketha Wenkampani Yokuqala uma uqhathanisa Nemininingwane Yenkampani Eseceleni
Uma kukhulunywa ngokukhangisa kohlelo lokusebenza lweselula, i-automation iyisihluthulelo. Awukwazi ukulindela ukuthi abantu bahlanganyele nawe ngedivayisi yeselula uma ungathumeli imininingwane efanelekile neyomuntu uqobo. Ngicabanga ukuthi nakanjani sizobona ukuhlolwa okuzenzakalelayo esikhathini esizayo esiseduze, lokhu kuhle!